सावधान ! कुखुराको मासुमा पनि देखियो कोरोना संक्रमण – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सावधान ! कुखुराको मासुमा पनि देखियो कोरोना संक्रमण
मन्त्रालयका अनुसार अहिले मुलुक दोस्रो तहको सङ्क्रमणमा छ । “निश्चिम क्षेत्रमा महामारीका रुपमा कोभिड–१९ फैलिएको छ, अझै नियन्त्रण बाहिर गएको छैन”, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमले भन्नुभयो, “काठमाडौँसहित पर्सा, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा कोभिड–१९ महामारीका रुपमा देखिन्छ, त्यसपछि दोस्रामा मोरङ, बाँकेलगायत केही जिल्ला छन् ।” उहाँले मानिसले स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा जोखिम बढेको बताउनुभयो । दुई मिटर दूरी कायम गरेर नियमित मास्क मात्रै लगाउने हो भने पनि ९६ प्रतिशत सङ्क्रमण रोक्न सकिने जनस्वास्थ्य विज्ञको भनाइ छ । “जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नै फलो नगर्ने, भीडभाड बढाउने, टेर्दै नटेर्ने, अनि कसरी सङ्क्रमण रोक्न सकिन्छ”, डा गौतमले आक्रोशपूर्ण रुपमा भन्नुभयो ।
यसै क्रममा विश्वका बिभिन्न देशमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । मानिसहरुमा देखिएको कोरोनाभाइरस पछिल्लो समय विभिन्न जनावरमा पनि देखिएको तथ्य फेला परेको छ । यस्तै चीनमा ल्याइएको कुखुराको मासुमा पनि कोरोनाभाइरस देखिएको छ । ब्राजिलबाट चीनमा ल्याइएको कुखुराको मासुमा कोरोनाभाइरस फेला परेको न्यु योर्क पोष्टले जनाएको छ ।
सेन्जेन शहरमा नियमित कोरोना जाँचको क्रममा कुखुराको मासुमा कोरोनाभाइरस फेला परेको हो । न्यु ओर्क पोष्टका अनुसार प्याक गरिसकिएको कुखुराको पखेटामा कोरोनाभाइरस देखिएको हो । पछिल्लो समय चीनमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण कम देखिन थालेको छ । हालसम्म चीनमा ८४ हजार ४ सय ५६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जमध्ये ७९ हजार ३ सय ९८ जना निको भइसकेका छन् । चीनमा अहिले सक्रिय कोरोना संक्रमित ७ सय २४ जना मात्र रहेका छन् ।
त्यस्तै यसैबीच पेरिसको गैर पेयजलको श्रोतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ । पानीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेपछि विश्वमा कोरोनाको महामारीले अर्काे रुप लिएको आँकलन गर्न थालिएको छ । तर शहरका अधिकारीहरुले भने गैर पेयजलमा कुनै संक्रमणको खतरा नरहेको बताएका छन् ।पेरिसको जल एजेन्सीको प्रयोगशालाले शहरका बिभिन्न क्षेत्रमा लकडाउन पछि तत्काल पेय जलका २७ नमुना परिक्षण गरेको थियो । त्यसैबेला २७ मध्येका ४ नमुनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको थियो ।
मध्यरातमा प्रेमी बोलाएर श्रीमानको ह’त्या, विहान रुँ’दै नाटक गरेर छिमेकी गुहारीन् !
नेपाल जाने उडानबारे सोध्न फोन नगर्नुस्, हामी जानकारी गराउँछौं’ – दूतावास
कोरोना महामारीको अझै खराब अवस्था आउने डब्ल्युएचओको चेतावनी